Fihetseham-pandrosoana 7 Fomba tsara indrindra amin'ny fanodinana fitaovana
Mampiasa Data Scraping Studio 5 minitra. Azo antoka fa iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra sy mahasoa indrindra web amin'ny Internet. Data Scraping Studio dia manana fitaovana mahery vaika sy mpampiasa mora ampiasaina ary manangona angona avy amin'ny tranonkalan'i Ajax, tranokala miaro ny sehatra, tranonkala tsotra sy dynamique, XML, JSON ary loharano hafa mitovy amin'izany. Ny sasany amin'ireo endritsika mahagaga dia voalaza etsy ambany.
1. Fikarohana fitadiavam-bola tsotra:
Toy ny mpitsikilo malaza rehetra, ny Data Scraping Studio dia manome fomba tsara kokoa hikaroka teny fanalahidy - divertimento giochi milano. Tsy maintsy maka sy mametaka an'io fitaovana io fotsiny ianao ary ampiasao izany mba handaminana ny angon-drakitra mifototra amin'ny teny fanalahidyo. Mitondra teny sy fehezanteny maro izy mba hahazoana aingam-panahy. Noho izany, tsy vitan'ny hoe mamerina ny angon-drakitrao ianao fa mandamina azy koa amin'ny fiteninao amin'ny teny fohy sy lava.
2. Fikarohana ara-tsakafo:
Data Scraping Studio no hany marika izay manatsara ny fikarohana tsena amin'ny mpampiasa azy. Raha oharina amin'ny ordinatera , dia manome valiny mahasoa amin'ny fikarohanao ity fitaovana ity. Noho izany, dia tonga lafatra ho an'ny mpividy, mpikaroka an-tserasera, mpianatra, mpanao gazety ary manam-pahaizana.
3. Adin'ny tranonkala:
Ny antony tsara indrindra fampiasana ny Data Scraping Studio dia manome safidy tsara ho an'ny fidirana an-tserasera. Izy io dia mifanaraka amin'ny navigateur rehetra sy ny rafitra miasa, ka mahatonga anao ho mora ny manakona ny angon-drakitrao sy mampiditra izany araka ny fanirianao.
4. Mampitaha ny angon-drakitra
Na dia ny endriky ny endriky ny toetr'andro aza dia tsy afaka mampitaha ny angon-drakitra roa na maromaro. Soa ihany fa ny Data Scraping Studio dia manana safidy io ary mamela anao hamakafaka ireo angon-drakitra amin'ny tranonkala samihafa izay ahazoana antoka fa hahazo ny kalitao sy ny vokatra azo antoka ianao. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia manitsy ny angon-drakitra kely, manala ny fahadisoana sy ny fitsipi-pitenenana rehetra avy amin'ny vokatrao.
5. Manara-maso ny kalitao:
Ity programa ity dia manara-maso ny kalitaon'ny angon-drakitrao rehefa voasariky ny entana. Midika izany fa tsy mila manara-maso ny fitrandrahana ianao satria ity fitaovana ity dia ahafahanao mamaky ireo angona azo amonoana sy azo havaozina ao amin'ny endrika tianao indrindra.
6. Profile / Product details provided:
Ireo mpampiasa an'io rindrambaiko io dia mahazo fahazoana mivezivezy amin'ny antsipiriany sy ny tsipiriany momba ny vokatra. Midika izany raha mampiasa ny Data Scraping Studio ho an'ny tranonkalanao e-commerce ianao, afaka mahazo vaovao avy amin'ireo gigana toa an'i Amazonia sy Ebay nefa tsy manohintohina ny kalitao. Azonao atao ny manandrana ity fitaovana ity mba hahazoana ny tsipiriany momba ny vokatra, ny lisitry ny anaran'izy ireo, ny famaritana azy ary ny sary. Araka izany, azontsika atao ny milaza fa Data Scraping Studio dia fitaovana tsara indrindra amin'ny Amazon Scraper sy Facebook Data Extractor.
Mitaraina ireo mpampiasa maro momba ny tsy fahampian'ny fampandrenesana ny asa fanarian-tsakafo. Tsy toy ireo fitaovana mahazatra, ny Data Scraping Studio dia hampitandrina anao rehefa voakilasy ny angona. Mila manitsy ny sehatra misy anao ianao ary manomboka mitory amin'ny alalan'ny mailaka. Azonao atao koa ny mampitandrina amin'ny findainao amin'ny fampiasana ireo safidy manokana. Noho izany, ny Data Scraping Studio dia ny rindrambaiko manontolo izay mikendry ny hampifanaraka kokoa ny dingam-pandehan'ny data. Ny zavatra tsara indrindra dia tsy misy vidiny.